दुबईमा रातको जीवन, रमाइलो गर्ने तरिका | यात्रा समाचार
दुबई, दुबई, दुबई ... अमीरात र राजधानी शहर हामी बारम्बार यो नाम सुन्छौं जब यो धन, तेल र विशाल भवनहरूको कुरा आउँदछ जुन बादलहरूलाई खेर जान्छ। पक्कै पनि तपाईंले अनौठो वृत्तचित्र देख्नुभयो, तपाईंले फोटोग्राफहरू देख्नुभयो र कसैलाई चिन्नुभयो जो छुट्टीमा गएको छ वा कम्तिमा यसको जबरजस्ती एयरपोर्टमा रोकेको छ। ए तेसो पो?
दुबई, शहर, आधुनिक छ, शानदार छयो मरुभूमिको बीचमा र समुद्रको किनारमा देखा पर्दछ जुन रंग क्यारिबियन हो। एक हो विश्वव्यापी शहर संसार भर बाटै मानिसहरु बसोबास गर्छन् र धनले यो देख्यो कि यसलाई जन्मिएको छ र यसले यसलाई उभिरहन्छ रातको रमाइलोको एक ठूलो सम्झौता छ त्यो पनि प्रेमीहरूलाई चकित हुनेछ नाइटलाइफ लन्डनर।
1 दुबई, नयाँ शहर
2 दुबईमा रातको जीवन
3 सेतो दुबई
4 अरमानी प्राइभ
दुबई, नयाँ शहर
यो उही नामको इमिरेट्सको राजधानी हो र दुबई क्रिकले यसलाई दक्षिणमा बुर दुबई र उत्तरमा देइरा दुई भागमा विभाजित गर्दछ। फारसी खाडीमा आराम गर्नुहोस् र केन्द्रमा बस्न छैन र लगभग २० लाख भन्दा कम मानिसहरु।
यद्यपि यो १ the औं शताब्दीमा स्थापना भएको थियो २० औं शताब्दीमा उनीसँग समृद्धि आयो 70० को दशकमा संयुक्त अरब एमिरेट्सको संयोजनको साथ हातमा। यद्यपि यो युएईको राजधानी होइन, अबु धाबी हो, यो आज सब भन्दा महत्त्वपूर्ण शहर हो, सुपर विश्वव्यापी र सुपर आधुनिक। गम्भीर पैसा यहाँ लगानी गरिएको छ र वास्तुकला एक उदाहरण हो। स्वाभाविक रूपमा यस विकासको विपरित क्षेत्र भनेको गरीब देशका मजदुरहरूको बसाई, कम तलब र गरिबी हो।
दुबईमा रातको जीवन
एक कोस्मोपोलिटन शहर जहाँ संसारभरका मानिसहरू बसोबास गर्दछ रमाइलो मनोरन्जन गतिविधि हुन्छ। यो शंघाई, न्यू योर्क, लन्डन वा ह Hongक Kongको साथ हुन्छ तर वास्तवमा दुबई यस विषयमा सबैभन्दा नयाँ सेटिंग हो र यसको विचित्र कुरा यो हो कि यो अझै पनि मुस्लिम शहर हो।
दुबईमा त्यहाँ धेरै रेस्टुरेन्टहरू, बारहरू र नाइटक्लबहरू वा डिस्कोहरू छन्। धेरै बार र क्लबहरू तिनीहरू होटल भित्र छन् र भित्र तपाई पूर्व र पश्चिमका मानिसहरूलाई भेट्दछौं। यहाँ, जबसम्म तपाईं २१ बर्षको हुनुहुन्छ, तपाईं रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ। र यो कि तपाईं मुस्लिम हुनुहुन्न, स्पष्ट रूपमा, किनकि जसले विश्वास विश्वास गर्दछन् रक्सीलाई कडा निषेध गरिएको छ। रक्सी किन्नको लागि तिनीहरूले तपाईंको राहदानीको लागि माग गर्न सक्छन्, यो तपाईंको उमेरमा निर्भर गर्दछ।
यदि त्यो मौकाबाट तपाईंले कार भाँडामा लिनुभयो वा कसैलाई चिन्नुहुन्छ र तपाईं कारबाट यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई यो कुरा यहाँ जान्नुपर्दछ गाडी हाँक्ने र पिउने सम्बन्धमा नियम कडा छ र सहिष्णुता शून्य छ। तपाईं रात बाहिर एक रातको साथ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि डिस्कोमा जान सक्नुहुन्छ.
लुगा आकस्मिक तर सुन्दर छन्। म तपाईंलाई बताउन चाहन्छु कि दुबईमा छुट्टीको लागि तपाईं कत्ति राम्रो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अलमारीमा स्किप नखोज्नुहोस् र तपाईंको सूटकेस राम्रा लुगाहरू र सामानहरूले भर्नुहोस्।
चाल बिहिबार राती देखि सुरु हुन्छ किनभने यहाँका मानिसहरूका लागि सप्ताहन्त शुक्रवार र शनिबार हो। यदि तपाईं केटीहरूसँग यात्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईं बुधवार र बिहिवारको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ, जुन महिलाहरूको लागि निःशुल्क वा छुट दिनहरू हुन्छन्। र हुनसक्छ रक्सी पनि पिउँछ र केही पनि तिर्दैन! जे भए पनि, दुबईमा धेरै पार्टी भइरहेको छ भने पनि, सूर्यको साथ ओछ्यानमा जाने आशा नगर्नुहोस् किनकि आन्दोलन रात १० बजे सुरू हुन्छ तर बिहान past पछिल्लोमा विस्तार हुँदैन.
हेरौं केही क्लब वा हटस्पट दुबई रातमा:
यो ठाउँ करीव दुई बर्ष पुरानो हो र यो शहरको सब भन्दा ठूलो र सबैभन्दा अनौंठो नाइटक्लब हो। यो Meydan रेसकोर्स भव्य स्ट्यान्डको टेरेसमा अवस्थित छ, केहि हदसम्म केवल केन्द्र बाहिर। तर त्यस कारणका लागि यो राम्रो ठाउँ हो किनकि तपाईंसँग शहरी स्काइलाईनको अवलोकन दूरी अविश्वसनीय छ।
यो सेप्टेम्बरको बीचमा खुल्छ, तातो कम गर्न थाल्छ, र यो जाडोमा मात्र खुला रहन्छ। यसका सेवाकर्ताहरू स्थानीय मानिस हुन् तर त्यहाँ धेरै विदेशीहरू, बासिन्दा र पर्यटकहरू छन्। तपाईं नराम्ररी लुगा लगाउन सक्नुहुन्न ठिक छ, यहाँ तपाइँ सुन्दर हुनुपर्दछ, शान्त हुनुहोस्, ठाडो हुनुहोस्। सबै भन्दा राम्रो तपाईं मा फेंक छ कि, सरल। जब तपाईं आइपुग्नुहुन्छ तपाईं यो प्रेम गर्नुहुन्छ र निश्चित रूपमा तपाईं ढोकावाला तपाईं बताउन चाहनुहुन्न, होइन, तपाईं यहाँ हुनुहुन्न.
तपाईं अगाडि कल गर्न सक्नुहुन्छ र टेबुल रिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ वा कुनै आरक्षण बिना सोझै जान सक्नुहुन्छ, यद्यपि यो सुझाव दिइन्छ भने, मध्यरात भन्दा अघि राम्रो आइपुग्न सक्छ, जुन तातो समय हो। यो वास्तवमै ठूलो ठाउँ हो, माथिल्लो छत, राम्रा बत्तीहरू सहित प्रत्यक्ष डीजेको र केहि अन्य एक्रोब्याटिक प्रस्तुतीकरण रातमा धेरै र color दिन्छ। उदाहरण को लागी, गत मे २ DJ MOnkey खेले,2नेल्ली मा, अप्रिल मा बेबे रेक्शा खेले ...
यदि तपाईं थोरै जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं तिनीहरूको वेबसाइट वा फेसबुक पृष्ठ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको साथ छ। के यहाँ दुबईमा अरमानी होटेल छ, ठीक संसारकै सब भन्दा अग्लो भवनमा, बुर्ज खलिफा। यो एक को बारे मा छ फेन्सी नाइट क्लबयो सरल छ, त्यसैले त्यहाँ महिला र पुरुषहरू राम्रोसँग लुगा लगाइएको, सुगन्धित र पैसा र वर्गको साथ छन् तर सधैं अरू केहि भन्दा रमाईलो गर्न उत्सुक हुन्छन्।
सजावट कालो र सेतोमा छ, यो एक ठूलो बस्ने ठाउँ, एक बार र एक नृत्य फ्लोर छ संसारको सबै भन्दा राम्रो डीजे को तालको लागि घण्टा खर्च गर्न। बिहीबार, शुक्रवार र शनिबार दिउँसो १० देखि बिहान Open सम्म खोल्नुहोस्। त्यहाँ कलात्मक घटनाहरू, प्रत्यक्ष डीजे वा संगीतकारहरू हुन सक्छन्। अवश्य पनि, त्यहाँ सँधै ग्लैमर हुन्छ, यो कसरी हुन सक्दछ यदि यो रातमा छ, संगीत र पेय पदार्थ छ र तपाईं बुर्ज खलीफामा हुनुहुन्छ ...
यदि तपाईंलाई मनपर्‍यो भने हिप हप दुबईमा यो संगीत विधाको आनन्द लिनको लागि एक ठाउँ छ: Cirque Le Soir। यो एक प्रसिद्ध एवेन्यू मा स्थित छ, Sheay Zayed, फेयरमोन होटल भित्रt, र डिस्को भन्दा बढी यो सर्कस जस्तो देखिन्छ... यो एक अनौंठो ठाउँ हो, शैलीहरूको मिश्रणको साथ र धेरै थिम पार्टीहरूत्यसैले तिनीहरू हप्ता पछि हप्ता हुन्छ।
२०० in मा यसले आफ्नो ढोका खोल्यो र यो आफ्नो मूल घर, युनाइटेड किंगडमदेखि टाढा पहिलो शाखा हो, यद्यपि यो अन्तिम नहुने देखिन्छ किनकि मियामी, इस्तानबुल र बेरूत सूचीमा छन्। यो एक साइट हो स्टिफेन डुपौक्स द्वारा डिजाइन गरिएको, न्यू योर्कको शानदार बुद्ध बारबाट उस्तै, मियामीको निक्की बीच वा लन्डनमा कोकुन। यसप्रकार, उनले आफ्नो शैलीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू बटुल्न सकेका छन्।
यो अर्को संसारबाट आएको स्थान हो, भित्र सजावट र वातावरणको कारण। त्यहाँ सर्कस कार्यक्रमहरू छन्, मान्छेहरू स्टिल्ट्स, कन्टोरन्टिस्टिस्टहरू, ट्याटू डान्सरहरू, ड्रमहरू, बुर्लेस्क डान्सर्स, तरवार निल्नेहरू, जादूगरहरू, जुन तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ मा हिड्दै छन्। डेभिड ग्वेटा, कालो आँखें मटर, मडोना, क्याटी पेरी र दर्जनौं हलिवुड अभिनेता र अभिनेत्रीहरू पनि यहाँबाट आएका छन्।
तपाईंलाई पहिल्यै थाहा छ, तपाईंसँग दुबईमा रात्रि जीवनको आनन्द लिन तीनवटा अनुकरणीय ठाउँहरू छन्: ह्वाइट दुबई, अरमानी प्रिभ र ले क्रिक ले सोयर। सबै अद्वितीय, सबै अविस्मरणीय। जस्तो दुबई नै।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » दुबई » दुबईमा रातको जीवन, रमाइलो गर्ने तरिका